Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, Pixel နဲ့ Pixel XL တို့ကိုစျေးလျှော့ရောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Dailysteals! – AsiaApps
Dailysteals ဟာ Samsung Galaxy S7 Edge ကို $259.99, Galaxy Note5ကို $159.99, Pixel ကို $339.99 နဲ့ Pixel XL ကို $399.99 အစရှိတဲ့စျေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းက တစ်ခုထဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ Edition နဲ့ Storage ကိုလိုက်ပြီးစျေးနှုန်းကပြောင်းလဲနေမှာပါ။ Samsung Galaxy S7 Edge နဲ့ Galaxy Note5ကိုတော့ Scratch and Dent နဲ့ B grade ဆိုပြီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးနဲ့ရောင်းချနေတယ်ဗျ။ Galaxy S7 Edge အတွက် Scratch and Dent အမျိုးအစားကိုတော့ $259.99 နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး B grade ကိုတော့ $289.99 နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy Note5အတွက်ကတော့ Scratch and Dent ကို $159.99 နဲ့ B grade ကိုတော့ $179.99 နဲ့စျေးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိ Storage ပိုင်းကတော့နှစ်မျိုးလုံးအတွက် 32 GB ပဲရှိပါတယ်။
Pixel ကတော့ 32 GB နဲ့ 128 GB နှစ်မျိုးရောင်းချနေပြီး Pixel XL ကတော့ 32 GB တစ်မျိုးသာရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ 32 GB Pixel ရဲ့စျေးက $339.99 ဖြစ်နေပြီး 128 GB အတွက်ကတော့ $399.99 ပါ။ Pixel XL ရဲ့ 32 GB စျေးကလည်း $399.99 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Model တစ်ခုချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ Edition တွေရှိနေမှာကြောင့် Website ကိုသွားပြီးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Shipping ကတော့အခမဲ့ပါ။
??? Samsung Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, Pixel or Pixel XL
Android, Deals, Google, Samsung